​काम सुरु नहुँदै पुर्ननिर्माण प्राधिकरण विवादमा
दोलखा । भुकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पूर्ननिर्माण गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको पुननिर्माण प्राधिकरण दोलखामा काम सुरु नगर्दै विवादमा मुछिएको छ । विज्ञ टोलीसहित सर्वपक्षिय छलफलमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले..
​नेपालको सम्मान र गरिमा बढ्ने गरी प्रस्तुत हुन प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच बिग्रिएको सम्बन्धलाई समझदारीमा फर्काउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभएको छ । भ्रमण दलमा सहभागी सदस्यहरूलाई आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा..
​एउटै हुचिल तीन करोड रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुने
काठमाडौं । प्रहरीले दुर्लभ वन्यपंक्षी हुचिलसहित काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट सातजनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ । संरक्षित पंक्षी हुचिलको तस्करी गर्नुलाई साइटिस महासन्धी १९७५ विरुद्दको अपराध मानिन्छ । संरक्षित तथा दुर्लभ वन्यपंक्षी..
धरहरा पुनःनिर्माण कोषको बैंक खाता खोलियो (राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक थापाथली खाता नम्बर १४३०००१९८००१)
काठमाडौं । ‘मै बनाउँछु धरहरा अभियान’ अन्तर्गत धरहरा पुनःनिर्माण कोषको बैंक खाता खोलिएको छ । खातामा धरहरा पुनःनिर्माणमा इच्छुक जोसुकैले रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले थापाथलीस्थित राष्ट्रिय बाणिज्य..
महानगरपालिकाले मनोरञ्जन कर नतिर्ने सिनेमा हललाई कारबाही गर्ने
काठमाडौं। काठमाडौ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालन भएका मनोरञ्जन कर नतिर्ने सिनेमा हललाई कारबाही गरिने भएको छ। महननगरभित्र रही सञ्चालित सिनेमा हलले मनोरञ्जन कर हालसम्म नतिरेकाले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको महानगरका राजस्व शाखा..
​लामो बन्दले भारतीय बजार प्रभावित
जनकपुर । तराई मधेसमा भएको लामो समयदेखिको बन्द, हडताल र नाकाबन्दीले सीमावर्ती भारतीय बजारसमेत प्रभावित भएको छ। मधेसी मोर्चाले गरेको बन्द हडतालको कारण सीमावर्ती भारतीय बजार जयनगरमा मात्रै २०० करोड बढी..
​‘‘अरुको सहयोगले देश बन्दैन’’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण देशले खरबौं रुपैयाको नोक्सानी व्यहोर्नु परेकाले राष्ट्रको पुनःनिर्माणका लागि सङ्कल्प गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको १४ औं सम्मेलनको..
​प्रेम प्रस्ताव अस्विकार गर्दा युवतीमाथि छुरा प्रहार
उदयपुर । लामो समयदेखि प्रेम प्रस्ताव राख्दै आए पनि युवतीले नमानेको भन्दै उदयपुरमा एक युवकले युवतीमाथि नै छुरा प्रहार गरेका छन्। उदयपुर पञ्चावती गाविस–४ बोहोरी बोट बस्ने १७ वर्षीया फूलकुमारी..
​बाबुरामको नयाँ शक्तिद्धारा दराज कब्जा, पत्रकारको परिवारलाई निकाला
काठमाडौं । पुरानो शक्ति अर्थात् कम्युनिष्ट दर्शन असान्दर्भिक भयो भन्दै नयाँ शक्ति खोल्न पुगेकाहरुको कार्यशैलीचाँहि फिटिक्कै नसुध्रिएको ठूलो प्रमाण फेला परेको छ । जनताको नाममा क्रान्ति र परिवर्तनको सपना बुन्दै यो..
​अखिलको १६ सय मतदाता, ७ सय उम्मेदवार, आज मतदान
काठमाडौं । अनेरास्ववियुको २२औँ महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि बुधबार निर्वाचन हुने भएको छ । अध्यक्षमा संस्थापन पक्षकी नवीना लामा र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका दीपक गौतमबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको..
​‘आपसी समझदारी वृद्धि र सम्बन्ध सुदृढीकरण भारत भ्रमणको मूल उद्देश्य’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पारस्परिक समानता र लाभका आधारमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन तथा आपसी समझदारी अभिवृद्धि गर्न आफू यसै साता भारतको राजकीय भ्रमणमा जान लागेको बताउनुभएको छ..
​रेडकार्ड देखाउने रेफ्रीलाई गोली हानी हत्या
काठमाडौं । आफूलाई रेडकार्ड देखाएको झोँकमा एक खेलाडीले रेफ्रीलाई गोली हानी हत्या गरेका छन्। ४८ वर्षीय सिजर फ्लोरेजलाई खेलाडीले तीन वटा गोली हानेको गोलडटकमले जनाएको छ। घटना अर्जेन्टिनाको कोर्डोबामा भएको हो।..
​नेपाली टिमले उपाधि जितेपछि कसले के भने ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली ट्विटरमा साग फुटबलमा नेपालको विजयप्रति मुलुक गर्व गर्दछ । बधाई नेपाली खेलाडीलाई । कांग्रेस कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडल फेसबुकमा नेपालको सान बढाएकोमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई हार्दिक बधाई र स्याबासी..
​बाटोमा भेटिएको १४ लाखको चेक साट्ने युवक पक्राउ
पर्सा । बाटोमा भेटाएको चेकबाट रकम साट्ने एक युवक पक्राउ परेका छन् । रौतहट जटाहा(१ का २० वर्षीय बसन्तप्रसाद सोनारलाई पर्सा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनले बाटोमा फेला परेको १४..
रुस र अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन बीच नयाँ शीतयुद्ध शूरु : दिमित्री मेदभेदेभ
एजेन्सी/म्युनिख । रुसी प्रधानमन्त्री दिमित्री मेदभेदेभ म्युनिखमा सुरक्षा सम्मेलनलार्इ सम्बोधन गर्दै रूस र पश्चिमा शक्तिका बीच देखिएको तनावले संसार नयाँ शीतयुद्धमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । युक्रेन संघर्ष एवं सिरियाका कारण..
हिटलरलाई गान्धीले सन् १९३९ मा यस्तो चिठी लेखे
महात्मा गान्धीले सन् १९३९ मा जर्मनीका नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलरलाई एउटा चिठी लेखेका थिए । तर, त्यो चिठी हिटलरसम्म पुगेन । २३ जुलाई १९३९ मा गान्धीले युद्ध रोक्न अनुरोध गर्दै हिटलरलाई..
​साधन स्रोत, भारतीय बजार, चीनको पुँजी र प्रविधिको संयोजनमा ध्यान पुर्याउन आग्रह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका अवसरमा दुई देशबीचको सम्बन्धका लागि मात्र होइन, दक्षिण एशियाको स्थायित्व र शान्तिका लागि पनि समृद्ध नेपाल आवश्यक छ भन्ने सन्देश पु¥याउन र महसुस..
अस्ताए संविधान निर्माणका मुख्य अभियन्ता कोइराला
मदन गौतम काठमाडौं । छ दशकअघिदेखि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको सदीक्षा पूरा गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुहुने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला सदाका लागि हामीबाट बिदा..
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । तीनदिने भारत भ्रमणपछि आज स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रिय समाचार समिति..
सुशीलको अन्तिम दिन, बिहानदेखि रातिसम्मका १२ घटना
१ बिहान उठेर नुहाए २ १० बजे सामान्य खाना खाए ३ कांग्रेस काठमाडौंको अधिवेशन उद्घाटन जान ठीक परे ४ पानी परेपछि चिसो हुन्छ भन्दै रोकिए ५ अधिवेशन उद्घाटन गर्न वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई बोलाउन..
एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई स्वाइन फ्लू भएको पुष्टि
काठमाडौं । एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई स्वाइन फ्लू भएको पुष्टि भएको छ । नौ दिनदेखि ज्वरोले थलिएका उनको सोमबार टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालमा र्‍याल परीक्षणपछि स्वाइन फ्लू भएको खुलेको हो..
​भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजद्वारा सुशीलप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण, प्रधानमन्त्रीलाई भेटी आजै फर्किने
काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेकी छन् । मंगलबारै काठमाडौं आएकी स्वराज दशरथ रंगशाला पुगेर कोइरालाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेकी हुन्..
काठमाडौं । सरकारले नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अन्त्येष्टि राजकीय सम्मानका साथ गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले स्व कोइरालाको सम्मानका..
काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्ना निजी चिकित्सक र सहयोगीसँग अन्तिम संवाद गर्नुभएको थियो । निधनअघि नेता कोइरालाले अन्तिम पटक आफ्ना निजी सहयोगी कृष्ण अर्याल र चिकित्सक डा..
काठमाडौँ । प्रणय दिवसको लागि यो वर्ष भारतबाट एक लाख वटा प्रेमको प्रतिक मानिने रातो गुलाफ ल्याइने भएको छ । गर्मी समयमा नेपालमा उत्पादन हुने फूलले नै माग पूरा गर्ने भए..
राजश्व असुलीको लक्ष्यसहित भन्सार विभागले ल्यायो राजश्व संकलन रणनीति
काठमाडौं। लामो समयदेखि अवरुद्ध भन्सार विन्दु सहज भएसँगै भन्सार विभागले राजस्व सङ्कलनको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्ने रणनीतिसहित क्रियाशील भएको जनाएको छ । तराई मधेसमा जारी आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण..
​अवैध र कमसल खालको रक्सीले २६ जनाको ज्यान लियो
जकार्ता । इन्डोनेसियामा कमसल खालको रक्सीले २६ जनाको ज्यान लिएको समाचार छ । इन्डोनेसियाको मध्यप्रान्त जाभामा अवैध रुपमा उत्पादित र कमसल खालको रक्सीले ती व्यक्तिको ज्यान लिएको समाचारमा जनाइएको छ..
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले सरकार र सिंहदरबार छाडेको दिन प्रश्न सोध्ने ठाउँ नहुने गरी काम गरिने बताउनुभएको छ । प्रेस चौतारी नेपालको १८ औँ स्थापना दिवसका आज आयोजित..
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुर्सीमा बसिरहेको मान्छेलाई आसन ग्रहणका नाममा अब आइन्दा उठाउने काम नगराउन कार्यक्रम आयोजकलाई सुझाव दिएका छन्। गृहमन्त्रालयले ६६औँ प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आयोजना गर्ने कार्यक्रमको कार्यसूची..
नुवाकोट । स्थानः नुवाकोटको तारुकास्थित नेकपा ९एमाले० जिल्ला अध्यक्ष नारायणप्रसाद खतिवडाको अस्थायी टहरो, जहाँ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्द पोखरेल निकै छट्पटीमा देखिनुहुन्थ्यो । मन्त्री पोखरेलले कोटको खल्तीबाट मोबाइल..
Results 1994: You are at page 56 of 67